Abenzi basechina abasebenza ngemitshini eyongezelelweyo kunye nabathengisi | Oomatshini abazizityebi
Umgca wokulungiselela, ukuphinda usebenzise ifilimu ye-PP PE, iingxowa, iiflakes, zibenze babe ziipellets. Isixhobo sokondla samkela itekhnoloji yobuchwephesha yenkampani, enokunceda ekuxubeni izinto ezixubileyo kwaye inyanzele ukondla iscrew extruder enye ukuphucula ukusebenza kunye nomgangatho wegranulation;
Izixhobo zokuvelisa ipellet /umatshini / umgca:
Uphawu kunye noMsebenziUmatshini wokuvelisa wePellet :
Isixhobo sokondla samkela itekhnoloji yobuchwephesha yenkampani, enokunceda ekuxubeni izinto ezixubileyo kwaye inyanzele ukondla iscrew extruder enye ukuphucula ukusebenza kunye nomgangatho wegranulation;
Zombini ezi zixhobo zimbini zokujija kunye nesikere esinye siqhutywa yitekhnoloji yokuguqula amaza e-AC, enokuziqhelanisa neemfuno ezahlukeneyo zetekhnoloji;
Umphambili wentloko yomatshini wamkela isixhobo esitshintshayo esikhawulezayo esitshintshayo, esigcina ixesha kunye nomzamo kwaye sihambelana nokusingqongileyo;
I-granulator yamkela intloko yokusika ejikelezayo kunye nesixhobo esihle sokucoca umoya opholileyo oshushu opholileyo;
Inkcazo eneenkcukacha ngomatshini wokuvelisa i-pellet:
1. Isithwali sokuhambisa: ukuhambisa ifilimu ye-PE PE okanye iiflakes kwi-compactor / feeder.
2. Ifilimu ye-compactor yefilimu: ityumza kwaye icinezele ifilimu, kunye nefedcompress ifilimu kwi-extruder ngokunyanzelwa, ukwenza amandla emveliso aphezulu kwaye azinzile.
Inkqubo ye-3.Extruding: izinto zeplastikhi kunye negesi edinayo.
Isantya esiphakemeyo sokutshintshiselana kwe-Net kunye ne-Die-head: ukungcola kwezinto zokucoca, ukwenza imveliso izinzile ngakumbi.
Inkqubo ring ring pelletizingsystem: ukusika zithutha emanzini.
6. Inkqubo ye-noodle pelletizing : ukusika iipellets zokupholisa emva waitanki.
7.umatshini wamanzi: yenza iipellets zomile.
8.Vibrationsieve: susa i-badpellet kwaye ugcine i-pellet elungileyo.
I-9Air Blower: dlulisa iipellethi ezintle kwisisele.
10: isililo yokugcina: ukugcina pellet.
Idatha ye-Maintechnical yomatshini wokuvelisa i-pellet:
Amandla oMbane oPhambili
I-150-250kg / h
Umatshini wokudibanisa umatshini wokudibanisa